Cinegif: Dhizaini maCinemagraphs uye Mhuka dzeMhuka | Martech Zone
Mugovera, Gunyana 21, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ipo vhidhiyo isiri kuridzwa nevatengi vemazuva ano emaimeri, iwe unogona kutora pfungwa dzevateereri vako neanopa zvipo. Iyo yakagadzirirwa-yakanaka animated gif inogona kuwedzera yako email tinya-kuburikidza nemitengo nemaviri manhamba uye zvinotaridzika kunge zvinonakidza pane yako yepakati webhusaiti pasina kudzinga vashanyi. Vashanyi havana kujaira kuona kufamba kusingaoneki mumufananidzo mukati kana kutenderedza zvemukati mubrowser kunze kwekunge vari kubaya bhatani rekutamba.
Mubvunzo wevagadziri ndewekuti mumwe munhu anoenda sei nezvekugadzira? Iwe unogona zvachose kushandisa chishandiso senge Photoshop uye kugadzira iyo yehupenyu nekukwevera mafuremu kubva muvhidhiyo… asi izvo zvinogona kutora rakati rebei rebasa. Ndipo apo Cinegif inouya mukati - chikuva chakanyatso kuvakwa pakugadzira animated gifs.
Iwo wega muganho kuCinegif chikuva (icho chandinovimba vanochinja) ndechekuti ivo vanongobvumidza zviyero zvinosvika mazana matanhatu pixels uye 600 pixels akareba.
Kana zviri zvewebhu, ma animated gifs anogona kushandiswa muSocial Media paTwitter neGoogle + (asi kwete Facebook… booo). Google+ inoitendera iyo yezviitiko uye yekuvhara mafoto. Hupenyu hwezvipo zvinoshandawo muPowerPoint uye Keynote… zvinonhuwira mharidzo yako inotevera. Uye sezvo MMS inova yakanyanya kuwanda, zvipenyu zvine hupenyu zvinogona zvakare kutumirwa kuburikidza neIOS uye Android mameseji meseji!
Iwe unogona zvakare kutenga stock Cinegifs.
Tags: animated gifkuchangamukacinegifsinemagraphGIF
Wedzera tsoka Traffic In-Chitoro uye Pamhepo neFATWIN